Muqdisho oo berri wada munaasabad ah | KEYDMEDIA ONLINE
Muqdisho oo berri wada munaasabad ah
Ujeedka kulamadaan ayaa ah olole siyaasadeed, mid kasta oo ka mid ah dhinacyada ayaana ku faani doona inuu qeyb weyn ku lahaa guusha laga gaaray kiiska badda.
MUQDISHO, Soomaalia – Soomaalida oo dhan ayaa sugeysa go’aanka berri la filayo inuu ka soo baxo, Maxamadda Caalimaga ah ee Cadaaladda, kaas oo lagu rajo weyn yahay in ICJ, ay si kama dambeys ah muranka uga saari doonto badda Soomaaliya ee Kenya dooneyso in ay boobto.
Labo maalin ka hor, Dowladda Kenya ayaa sheegtay in aysan aqoonsan doonin go’aanka ICJ ka gaarto muranka soohdinta badda, taas oo sare u qaadday rajada Dowladda iyo Shacabka Soomaaliyed, ka qabaan cadaaladda kiiskaan.
Hadaba, waxaa si weyn magaalada Muqdisho, looga dareemayaa u diyaar-garowga, munaasabado kala duwan, oo u jeedkooda ugu weyn uu yahay, olole, siyaasadeed, waxaana la filayaa in ugu yaraan afar xafladood oo arrinkaas la xariira ka dhacaan caasimadda.
Madaxtooyada iyo Xaafiiska Farmaajo, ayaa qaban qaabinaya xafladda ugu weyn, waxaana la rumeysan yahay in Madaxweynihii muddadu ka dhamaatay, uu si weyn u sheegan doono inuu isagu soo hooyay guusha badda.
Sida ay caddeynayaan xogo ay heshay Keydmedia Online, Farmaajo, wuxuu la xariiray Madaxweynihii ka horreeyay Xasan Sheekh Maxamuud, oo xilligiisii dacwada la geeyay maxakamadda, wuxuuna weydiistay inuu ka soo qeyb galo xaflad ay Madaxtooyadu ugu dabbaal-dageyso guusha, hayeeshee, Xasan Sheekh ayaa arrinkaas ka cudur dartay.
Xisbiga UPD, ee uu hoggaamiyo MW Xasan Sheekh, ayaa dhankooda la filayaa in ay qabsadan xaflad weyn, si guusha kiiskaan loogu nisbeeyo, Xasan Sheekh.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo ah shaqsiga ugu weyn, ee kiiska badda lala xariiriyo, ayaa dhankiisa, berri munaasabad arrinkaas la xariirta ku qabanaya Muqdisho.
Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed, oo qudhiisa ka cudur daartay ka qeyb galka kulanka Farmaajo, ayaa isna la sheegayaa inuu xaflad arrinkaas la xariira qabanayo berri.